DAAWO: Maxaad ka taqaan Shaqsiyaadka Al- Shabaab ee lagu dilay Duqeymo diyaaraded?
MUQDISHO(P-TIMES)- Macluumaad xagga Sirdoonka ah oo ay PUNTLANDTIMES ka heshay dawladda Faderaalka iyo Jubbaland, waxay cadeynayaan in la dilay horjoogayaal katirsanaa kooxda Al- Shabaab kuwaas oo xiliga la weeraray qorsheynayay howlgalo ay doonayeen in ay dhibaato ugu geystaan Shacabka Soomaaliyeed.
Duqeyntan diyaaradeed oo kadhacday mid kamid ah deegaanada Jubbooyinka ayaa la sheegay in lala beegsaday xubnahan muhiimka ah oo uu ku jiro ninka mudada dheer la raadinayay ee Mahad Karataay looga dhex yaqaano Shabaab.
Mahad wuxuu ka mid ahaa liiska Argagixisada ee ay lacagta badan ku bixinaysay qabashadiisa dawladda Mareykanka, wuxuuna ku eedeysanaa abaabulida weerarkii Jaamacadda Gaarisa ee dalka Kenya iyo sidaas oo kale weeraro uu ka fuliyey Soomaaliya.
Puntlandtimes.com waxay heshay macluumad dheeraad ah oo ku saabsan shaqsiyadiisa iyo mudadii uu ku soo biiray kooxdan Al- Shabaab, halka uu ka yimi iyo hab dhaqankiisa Argagixisanimo.